Taura pamusoro nepachinko hondo chipfuva
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Taura pamusoro nepachinko hondo chipfuva
Old nepachinko ndiko, vamwe vanhu kuti vakanaka kutamba akanga nyore kunyange pasina zvakawanda zviri mubhizimisi. Recent nepachinko ndiko, kubhejera rakasimba kwazvo, akagadzirira kunyangarika mumaminitsi asingasviki 30 10,000 Yen.
nekuti ndiwo nepachinko yakadaro, kana iwe uchava Mawaso 1000, achava kuguma mari hapana nguva 50,000 Yen. Kuridza zuva rimwe ari asina rova ??zvikuru, ndechokuti anova mazana ezviuru zvakakodzera. Naizvozvo
, zvinova kwazvo chichava zvokuvakisa hondo pachipfuva. The Oh vanhu vanoda kuhwina
, haana kurwadziwa kuti zvechiuto Shinkin zvakawanda. Munguva ichangopfuura, kunewo ine muenzaniso mafungu, katsika simba kutora nguva refu kugumiswa mukana, mangwanani kunyange rakanaka anomira iri ringava crap zvaunoda kutsungirira. Zvakakosha chaizvo kuti agadzirire chete nevapfumi hondo chipfuva kutsungirira nayo.
vanhu vanoda kuhwina zvakanaka here asi kune avo vane nepachinko kuti vanakidzwe chitandadzo, hondo chipfuva anogonawo kuda kufunga nenzira yakasiyana pfungwa maonero.
kana iwe aidawo kuenda nepachinko ndechokuti, Ndinofunga Wokutanga nechokwadi hondo pachipfuva. War bhokisi iri, sei zvakanaka kana chete kubva miniti zvaunazvo iwe, vanhu sezvinoita kubenzi ose zuva, chete harichazombokuberekeri zvakakwana.
Naizvozvo, vanhu nehasha kana hondo chipfuva akarasika, Toka yakatorwa kubva shamwari, ndechokuti kuwedzera vauye kuunganidza hondo chipfuva uye chikwereti munhu pedyo dhigirii kuti yakatorwa kubva anoda. Kamwe Dzokorora chikwereti yaizivikanwa vanhu, panewo ngozi kunyange vakarasikirwa chikwereti, hapana anogona kuvazve ndikweretesewo mari.
kana kuziva mamiriro ezvinhu akadaro, kubva pamazuva akare, dzakadai nepachinko magazini, asi okushambadza makambani yemari vane zvakawanda Kuda, panewo nounyanzvi, akadai haana ngaateme ruoko aizongova. Asi ikozvino, zvakakwana kunewo chirwere inonzi nepachinko muropa, nepachinko yakapera akakwira nokushevedzera nedoro pakubhejera simba. _x000D _
Mukuwedzera, kuitira kurera hondo bhokisi mumakore achangodarika, tenga ane kadhi, vamwe vanhu kuti chokwadi chokuti zvinhu uye mari kurera mari. Easy nzira mari hondo anogona vachamutswa, asi, pakupedzisira, usakanganwa kuti anofanira kuripa mari.
pakupedzisira wakadzokororwa mari yakarasika chikonzero, uyewo anobvisa mari yokurarama, kuumba hondo bhokisi makambani zvemari uye ruoko yakadaro, nemiwo chokwadi kuti vanhu vakawanda kuti nepachinko. Kunyanya vakadzi, vave akati kuva nyore kuti kuwa.
nepachinko, sezvo kunyange kuziva kubuda kana kusiya, asi chakanaka kwazvo, kana zvichibvira mupfungwa kutamba, zvichangobva nepachinko hahusvikirwi vari kubhejera, tine zvinhu yava simba kukunda .
, dzakadai kuti ikoko kwete kutamba kana kumutswa yakawanda hondo muchipfuva, mamiriro nepachinko kuti vangobvumira vakauya kuna mupfungwa hurumende rava dambudziko. Nepachinko iri, mu mwero kuridza, edza vaidavira kuti vanakidzwe muzana.
ichangopfuura, zvava zvizhinji Dejihane pakona Yu Pachi sezvo kutamba nepachinko. Mukuwedzera, nekuti kupararira 1 Yen nepachinko kwave akura, ndinofunga kuti zvaizova vangaedza kunakidzwa pasina akasungwa kuna pfungwa takunda.
musoro hondo bhokisi inounganidzwa kuti uve kupenga uyewo upenyu. Musoro mari usingatangi kana pezvaaitsigira kuti kutamba Kana uri bhokisi kurwa, ndinofunga kuti zvingava akanakidzwa zvikuru utano. Kwakadaro iwe. Kunyanya vakadzi, vave akati kuva nyore kuti kuwa.
musoro hondo bhokisi inounganidzwa kuti uve kupenga uyewo upenyu. Musoro mari usingatangi kana pezvaaitsigira kuti kutamba Kana uri bhokisi kurwa, ndinofunga kuti zvingava akanakidzwa zvikuru utano.